Home News Maxaa ka jira in Mashaariicdii Ururka Iskaashiga Islaamka Ee Soomaaliya La Musuq...
Maxaa ka jira in Mashaariicdii Ururka Iskaashiga Islaamka Ee Soomaaliya La Musuq Maasuqay (XOG)
Sida ay baahisay laanta Af-soomaaliga ee VOA-da Mashaariicda uu Soomaaliya ka waday Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ayaa six un loo mamaulay. Sida uu ogaaday Galka Baarista mashaariic ku kacayey $6.6 milyan oo ayaan hirgelin ilaa haatan in ka badan 5 sano kadib markii la bilaabay.
Barnaamijka Galka Baarista waxa kale oo uu ogaaday in mashaariicda la musuqmaasuqay ee OIC ay qayb ka ahaayeen barnaamijyada horumarinta Soomaaliya oo ay maalgeliyeen hay’ado samafal oo laga leeyahay dalka Sucuudiga kuwaasi oo bixiyey $72 milyan oo dollar si mashaariicdaas oo lahaa saddex weji looga hirgeliyo Soomaaliya.
Dhanka kale Baaritaan gudaha ah oo uu sameeyey OIC waxaa eedaymo loo jeediyey Madaxii xafiiska OIC ee Soomaaliya Maxamed Iidle Sabriye iyo Madaxii Arirmaha Bani’aadminnimada ee OIC oo fadhigiisu yahay Jeddah Rami Inshasi. Labadaasi sarkaal ayaa midna la cayriyey kan kalana shaqadii laga wareejiyey.
Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaana ka gamban musuq-maasuqa iyo wax isdabamarinta,waxaana ay ka dhigteen dhaqan toosan oo hirgalay.